प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय पोशाक, दोशी को? - चारदिशा
September 27, 2014 चारदिशा राजनिति
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरीका पुगेका प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको रात्रिकालिन तस्वीर सामाजिक सन्जालमा फेलिएपछि नेपालको नै वेज्जत भएको महशुस गरिएको छ।जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको एक कार्यक्रममा सहभागि भएका वखत खिचिएका अशोभनीय तस्विर सार्वजनिक भएपछि किन कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ” ड्रेश कोड ” को वारेमा वताएन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि प्रधानमन्त्री सादा जीवन यापन गरेका राजनैतिक नेता हुन्।उनको सादगी र साधारण जीवनशैलीको सवैले प्रशंसा गरेका पनि छन्। तर यतिखेर उनी सर्वसाधारण होइनन्। देशकै प्रतिनिधत्व गर्दै राष्ट्रसंघको महाशभामा भाग लिन गएका सरकार प्रमुख हुन् उनी । यतिखेर उनी के वोल्छन्, कस्तो हाउभाउ देखाउँछन् , कस्तो पहिरनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसमा समग्र देशको नाम जोडिएर आउँछ। प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका नजिकमा रहेकाले देशको मर्यादा कायम वढाउन भुल्नु हँदैन थियो।
देशकै प्रधानमन्त्री भए पनि उनीलाई सवैकुराको ख्याल नहुन सक्छ। अन्तराष्ट्रीय परेवेश र कटनैतिक ज्ञान नहुन सक्छ। विदेशमा अध्ययन नगरेका र आफैले धेरै विदेश नघुमेका उनलाई सवै थाहा नहन सक्छ। उनीमात्र होइन, उनको ठाउँमा जो कोही भए पनि थाहा नहुन सक्थ्यो। त्यसैले त राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुलाई आवश्यक परेका समयमा सल्लाह दिन सल्लाहकार र व्यक्तिगत काममा सहयोग गर्न सहयोगीहरु नियुक्त गरेका हुन्छन्। उनीहरुको मुख्य काम भनेकै यस्तै वेलामा हो आवश्यक सल्लाह र सहयोग गर्ने। तर प्रश्न उठ्छ कसले जिम्मा लिएका थिए प्रधानमन्त्रीको ड्रेशकोड व्यवस्थापन गर्ने?
जीवनभर अविवाहित प्रधानमन्त्रीलाई परिवारवाट सहयोग र सल्लाह हुने कुर भएन।कार्यव्यस्तता र उमेरको हिसावले पनि आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले उनी नितान्त रुपले प्रशासनीय संयन्त्र र आफ्ना नजिकका विश्वासीहरुमा भर पर्नेुपर्ने भयो ।तर कसले हेर्छ उनको खानपान र पोशाक व्यवस्थापन ? अहिलेको अवस्थामा कुनै कर्मचारी अथवा राज्यकोषमा सुविधा पाउने उनकै पार्टिका कर्मचारी? ती कुन व्यक्ति हुन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिन कन्जुस्याई गरे वा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जरुरी ठानेनन्?
प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा निम्त्याउने आयोजकहरु भने सुटमा कसिएका छन्। वीचमा प्रधामन्त्रीलाई राखेर अँगालो मारेको अवस्थामा खिचिएको फोटो अन्तत अन्तराष्ट्रीय सन्चार माध्यममा पनि पुग्नेछ।राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई यसरी अँगालो वाँधेर तस्वीर खिच्नु कुटनैतिक मर्यादा र शुरक्षा दृष्टिकोणले पनि गलत कार्य हुनजान्छ। अन्तराष्टीय कुटनैतिक मर्यादामा यो एउटा उत्श्रृङ्खल कार्य हो।
अन्य प्रधानमन्त्रीको यस्तो भएको भए?
नेपालको जस्तो हेलचक्र्याईँ विदेशमा कमै हुन्छ । यदि यूरोपेली वा अमेरीकी देशमा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखको पोशाकमा कुनै कमिकमजोरी भयो भने उसले कामवाट विदा पाइसक्थ्यो। सानो कमजोरी जस्तो देखिएपनि यो त्यस्तो सानो कमजोरी होइन जसलाई पुर्णत वेवास्था गर्न सकियोस्।तर दण्डहीनता हावी भएको हाम्रो जस्तो देशमा यसलाई सामान्य रुपले लिइनेछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सल्लाह दिदैनन्?
प्रधानमन्त्री कोइरालाको अशोभनीय तस्वीर सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यस अघि सार्वजनिक भएको यो अस्विरमा उनको कुरा गर्दाको वसाइको अवस्था र उनी पछाडि विना जु्त्ता कट्टु लगाएकी महिला उभिउकी छिन्। किन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कुरामा सजग गराइदैन?